Mgbalị Mgbasa Ozi Email Gị Adịghị Mkpa Ọ bụrụ na Not Bughi Igwe Kachasị Mma | Martech Zone
Ka anyị na-achọ imeziwanye njikọ anyị, ihe mbụ anyị mere bụ mejuputa ndebiri ozi nzaghachi na-eji usoro anyị, CircuPress, iji kesaa ọdịnaya (Denye aha kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu). Mgbanwe e nwere n’ọnụ ọgụgụ abụghị obere ihe. Anyị na-eziga email anyị kwa izu karịrị ndị debanyere aha 70,000 na Monday na nke anyị nchịkọta na-egosi anyị na nke ahụ bụ otuto na okporo ụzọ anyị karịa ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ nkwalite ọ bụla.
Nke a emeghị rue mgbe ozi ịntanetị anyị kachasị maka ikiri mkpanaka. Ntọala dị ọcha, otu-kọlụm na mfe ịpị bọtịnụ buru ibu na njikọ mere ka ọdịiche dị na ịpị ndị mmadụ site na email ahụ laghachi na isiokwu. Ugbu a, anyị na-arụ ọrụ na mkpokọta redesign nke blọọgụ nke na ọ na-enye ọmarịcha ahụmịhe, na-anabata ahụmahụ site na desktọọpụ, mobile ma ọ bụ mbadamba.
Na-amasị ya ma ọ bụ na ọ bụghị, iji ngwaọrụ mkpanaka abụrụla nke abụọ anyị. Worldwa zuru oke ma n’ezie na-agagharị agagharị. Ndị ahịa na-akpa àgwà dị iche na smartphones na mbadamba, nke na-enye arụmọrụ na ike dị iche iche, yana maka ọtụtụ azụmaahịa nke a pụtara na ha nwere ike ịmalite ịmalite ịhụ ụfọdụ ndị ahịa ha ka ha na-apụ ma ọ bụrụ na ahịa ahịa ha anaghị agacha. Inwe usoro eji agagharị agagharị n’ebe dị mkpa iji mee ka ndị ahịa laghachi. Ciaran Carlisle, Ngosipụta
The ọnụ ọgụgụ bụ ihe ọ bụla dị mkpirikpi nke ịrịba maka mobile… ma ọ bụrụ na gị email ma ọ bụ gị na saịtị ahụ abụghị ezigbo onye ọrụ ahụmahụ na a mobile ngwaọrụ, ị na-atụba a tọn gị ahịa ego pụọ. Ndị a bụ ọnụọgụ 3 maka gị:
Ekwentị mkpanaka mepere emepe toro 180% n’ime nanị afọ atọ site na 15% rue 42%!
Onye isi 68% nke Gmail na Yahoo! emepe eme na smartphone ma ọ bụ mbadamba.
75% nke ozi ịntanetị elele na ngwaọrụ mkpanaka enwere ike ihichapụ ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị mkpanaka kachasị mma.
Tags: email ahia statsemail emeghe ọnụegostats emailMobile na Mbadamba ụrọemail mkpanakaemail na-anabata ozi ịntanetịemail na-anabatasmartphoneemail amaemail mbadamba
Sep 6, 2014 na 1: 00 AM
Eziokwu ahụ juru anya ịhụ na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ama ama na-emeghe ozi ịntanetị na ekwentị ya !!!